Sebenzisa imood yokuSebenza ngesiNgesi
Nangona ukusetyenziswa kwemo yokuzithoba ngesiNgesi kunqabile, kunzima ngokwaneleyo ukwenza indoda endala ikhale. Unokwenza izihlomelo nge babenjalo , ndinayo , ukuba kwaye nkqu Nangona nje . Ukuzithoba kusetyenziswa ukubonisa iimeko ezingezizo. Ikwavela kwimiyalelo, iminqweno, kunye nezicelo.
Sebenzisa iziqendwana nge
UTevye, umlinganiswa ophambili kwezomculo Umgcini ophahleni, ucula ukuba bendingumntu osisityebi onosizi lomntu owaziyo ukuba soze abe lihlwempu. Ingoma kaTevye imalunga ne imeko echasene nenyaniso - into engeyonyani. Qaphela isenzi kwisihloko: babenjalo. Ngokwesiqhelo (oko kukuthi, kwisivakalisi esibonakalisayo) isenzi-isibini esiya kuba Bendi. Kodwa uTevye uyacula Ukuba bendinjalo kuba akasisityebi. Isenzi babenjalo ikwimeko yokuzithoba.
Nayi eminye imizekelo yeziqendu ezikhoyo kunye nezexesha elizayo:
Ukudibana: Ukuba uRoger babenjalo impimpi ehloniphekileyo, ngekhe ityhile imfihlo ye-athomu efihliweyo kwimbotyi burrito.
Kutheni kufanelekile: URoger akayimpimpi ehloniphekileyo, kwaye uza kuyibhengeza le mfihlakalo.
NGAPHAKATHI Hat isifundo esiqhelekileyo - Isenzi sesibini siza kuba: URoger wayenjalo.
Ukushwankathela, kwizivakalisi ezizithobayo, babenjalo ihlala iyile nto uyifunayo (ngokungafaniyo kwingoma yeBeatles, xa uthando lukuyo yonke into oyifunayo). Nazi iinkcukacha ezimbalwa malunga nokuzithoba kweengxelo zangoku okanye ezizayo zeemeko ezichasene nenyaniso:
Sebenzisa babenjalo Zonke izifundo kwinxalenye yesivakalisi ezibonisa into engeyonyani. (Ukuba yena babenjalo Ukungeniswa yingcaciso kaMax.)
Ngenye inxalenye yesivakalisi, sebenzisa isenzi esincedayo Ngaba. (ULola Ndiza kujonga cwaka kuye.)
Ungaze usebenzise isenzi esincedayo Ngaba kwinxalenye engeyiyo yesivakalisi. Umzekelo:
Akulunganga: Ukuba bendiya kuba ngumongameli, bendiya kucela ikholoni yaseMartian ukuba ihlukane.
Kunene: Ukuba ndingumongameli, bendiya kucela ikholoni yaseMartian ukuba ihlukane.
Nangona nje ngamanye amaxesha unokuthi sub ukuba kwimeko-echasene nenyani. Jonga oku kulandelayo:
Ukudibana: Iqanda lilinyazwa emoyeni Nangona nje isixhobo esikhulu sentsimbi besizimisele ukumrhwaphiliza.
Kutheni kufanelekile: Iqanda alilandelwa ngabantu ababetha amaqanda. Ngokwenyani ulimaza emoyeni kuba ukwibhodi yokutyibilika enesondo elinye elibi.
NGAPHAKATHI Hat isifundo esiqhelekileyo - Isenzi sesibini siza kuba: Isixhobo sesinyithi esikhulu.
Ukwenza ii-subjunctives nge had
Iziqendu ziyavela amaxesha ngamaxesha kunye nesenzi esincedayo ndinayo. Izivakalisi ezadlulayo ndinayo lilungu lesivakalisi elichasene nenyani. Indawo echasene nenyani (oko kukuthi, ubuxoki) inxenye yesivakalisi inokuqala ukuba, okanye ukuba inokuqondwa.
Nayi imizekelo embalwa yokuzithoba kwangaphambili:
Ukudibana negama ukuba: Ukuba uLola ebesazi Malunga nemfihlo yeathom, ngewayengayityanga loo burrito.
Iipilisi ezingama-l484 zimhlophe zibelilong
Ukudibana ngaphandle kwegama ukuba: Ngaba ULola yaziwa Malunga nemfihlo yeathom, ngewayengayityanga loo burrito.
Kutheni kufanelekile: ULola wayengazi kwanto ngemfihlo yeathom; URoger wamxelela ukuba i-crunch kwi-burrito ivela kwimbotyi engaphekwanga.
NGAPHAKATHI Hat isifundo esiqhelekileyo - Isenzi sesibini siza kuba: ULola ebeyazi.
Sebenzisa iziqendwana ngemiyalelo, iminqweno, kunye nezicelo
ULarry uyakuthanda ukusebenzisa amandla akhe asebukhosini, ke kufuneka izenzi ezininzi:
Ubungangamsha bakhe buyalela ukuba bonke abantu bakhe kuba kubalwa emva koko wanqunyulwa intloko.
Ubungangamsha bakhe buza kwirhuluneli yephondo ngalinye khwela iAlp ekufutshane kunye tsiba Phezulu.
Ubukhosi bakhe buqhubela phambili bokuba umcwangcisi wakhe omthandayo womtshato hlala ebhotwe.
Izenzi ezibhalwe ngomxholo ziyazithoba. Ezi zivakalisi zifuna ukuzithoba kuba zivakalisa iminqweno, izicelo okanye imiyalelo engathanga ngqo.
Kunxibelelwano lwemihla ngemihla, izithethi ezininzi zesiNgesi ezilungileyo ngokugqibeleleyo ziyakuphepha ukuzithoba kwaye zisebenzise isenzi okanye isenzi esincedayo kufanele endaweni yoko. Nazi izicelo zikaLarry, ezine-infinitives okanye kufanele endaweni yezenzi ezisebenzisayo:
Ubungangamsha bakhe ufuna abantu bakhe ukuba kubaliwe ke ngoku wanqunyulwa intloko.
uyithatha njani ipenicillin vk 500 mg
Ubukhosi bakhe buthetha irhuluneli yephondo ngalinye kufuneka inyuke iAlp ekufutshane kunye tsiba Phezulu.
Ubungangamsha bakhe bafuna umcwangcisi womtshato amthandayo ukuma ebhotwe.
i-modafinil kunye ne-adderall zithathiwe kunye
yintoni i-meclizine 25 mg
yintoni ibhalsam yengwe